Kuyini ukuzilinganisa usimende? - Isazi seZD Floor
Ikhaya>Kuyini ukuzilinganisa usimende?
Hlela: UDenny　2019-12-22
I-Cement self-leveling level ephelele ibumba usimende olusebenzisa usimende, oluhlanganiswa ikakhulukazi ngezinto zokwenziwa ze-samente ezakhiwe usimende, ama-aggregates amahle, amafilimu nezengezo. Luhlobo olusha lwaphansi olungageleza futhi lube nezinga ngemuva kokuhlanganiswa namanzi nokuvuswa. Hlunga okuqukethwe. Ukuzilinganisa nosimende kuhlukaniswa kakhulu ngodaka nosimende olusebenzisa usimende nosimende owenzelwe wena.
Ukuzilinganisa nosimende luhlobo olusha lwezinto zokusebenzisa usimende ezakhiwe ngonyaka we-1970 zabe sezithuthukiswa ngezinye izinto.Lutho olusha lokulinganisa phansi.Ukuguqulwa kwendlela yokulinganisa indabuko yendabuko futhi kungayifaka ngempumelelo indlela yendabuko. Kuthuthukisa kakhulu ukugcwala komhlaba, futhi kungalungisa kalula isanti nomonakalo okulula ukwenzeka ngawo umhlaba wendabuko.
I-Cement self-leveling ine-fluidity enhle nokuqina, ukuzimela ngokwako, akukho ukudlidliza, akukho ukusikeka, ukwakhiwa okulula nokusheshayo, amandla aphansi abasebenzi, abushelelezi futhi abushelelezi, futhi anamandla aphezulu nokumelana namanzi okuhle. Izizathu ezahlukahlukene zokwakha nokunye. Kusetshenziswe kahle ezibhedlela, emafektri, ezindaweni zokusebenzela, ezindlini zokugcina izimpahla, ezitolo zezentengiselwano, emahholo wemibukiso, emahholo ezemidlalo nasemakhaya, emahhovisi, njll ukukala umhlabathi.
Kuyini ukuzilinganisa usimende? Okuqukethwe okuhlobene